Lamjung Manang News | » उजेलियाे भुकम्प पीडितकाे मुहार उजेलियाे भुकम्प पीडितकाे मुहार – Lamjung Manang News
उजेलियाे भुकम्प पीडितकाे मुहार
बेसीशहर, २४ बैशाख ।
पाचोक बारीगाउँकी ६६ वर्षीया मैसरी गुरुङको मुहार बल्ल उज्यालिएको छ । चार बर्ष अघिको विनाशकारी भूकम्पले घर भत्किए पछि घरबारबिहीन भएकी उनले कम्ती कष्ट त भोगिनन् । कति रात त उनले खुला आकासमुनी विताइन् त्यसको गन्ती उनलाई नै थाह छैन, कहिले बारीमा छाप्रो हालेर बसिन् । घाम, पानी, हिउँदको चिसो, बैशाख जेठको गर्मी त्यहीँ भोगिन् । चार बर्षसम्म असार साउनको मुसलधारे बर्षा पनि भिजेरै वित्यो ।
मान्छेलाई बरु खाना मीठो चाहिँदैन, रुखो सुखो जस्तो भए पनि जसोतसो पापी पेटै त भर्ने हो । तर निद्रा आरामको चाहिन्छ । धूपमा शितल र बर्षात्मा छतको आवश्यकता पर्छ । दिनभर लगतरान भएको ज्यानलाई राती आराम त चाहिने नै भयो । त्यो आराम बारीको पाटामा कसरी मिल्न सक्छ र ?
भुकम्पले घर भत्काएपछि मैसरीका दुःखका दिन शुरु भए । भएको एउटा घर भत्किहाल्यो, अर्को बनाउने पैसा उनीसंग थिएन । पैसाको अभावमा चार बर्षसम्म उनले काट्नुसम्म कष्ट काटिन् ।
मैसरीको जस्तै पीडा छ पाचोक बारीगाउँका सुकबर गुरुङको पनि । भुकम्पले घर भत्किएपछि उनी र उनको परिवारले पनि असाध्यै दुःख काटे । कहिले छाप्रोमा कहिले मकैबारीमा पनि रात कटाउन बाध्य भयो । घाम, पानी, हावा हुरी झेल्दै चार बर्ष ठूलो दुःखले कटाए उनीहरुलले ।
नयाँ घर बनाउन उनले पनि नखोजेका होइन, तर साथमा पैसा थिएन । थोरै पैसाले घर बन्ने भए पो ! सरकारले दिने पैसाले मात्रै घर बन्दैन । त्यो पैसा पनि अनेक प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने । गाउँका सोझासिधा र निमुखाका लागि त्यै पैसा निकाल्न पनि समस्या हुने । त्यै भएर घरै नबनाइ बसे सुकबीर ।
चार बर्षसम्म दुःखका दिन काटेपछि अहिले भने उनीहरुले नयाँ घर पाएका छन्, औधी खुशी छन् । बारीगाउँका घरबारबिहीन चार घरपरिवार भुकम्प पिडीतले नयाँ घर पाएका हुन् । भुकम्प गएदेखि कष्टकर जिवन बिताइरहेका पीडितको चार बर्षपछि नयाँ घर पाउँदा खुशीको सिमै छैन । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले उनीहरुलाई
अति जोखीमको सुचिमा राखेको थियो ।
यु.के.एडको आर्थिक सहयोग डि.एफ.आई.डिको व्यावस्थापन, प्राक्टकल एक्सन एक्सनएड कोडको साझेदारी र जनचेतना अभिवृद्धी र विकास अध्ययन समिति (कोपाडेस) लमजुङद्धारा सञ्चालित कोहि पछि नछुटुन् (लिभ नो अन बिहाइण्ड) परियोजनाले दोर्दी गाउँपालिका ५ पाचोक बारीगाउँमा भुकम्प प्रतिरोधी एक कोठे एउटा र २ कोठे तीन वटा घर निर्माण गरिदिएको हो । घर पाएपछि उनीहरुको खुशी शब्दमा ब्यक्त गर्न नसकिने परियोजनाका संयोजक भोलानाथ सिलवालले बताए ।
सरकारले अहिले सम्म नयाँ घर बनाउन त के कतिपय ठाउँमा भूकम्प पीडितहरुसँग अनुदान सम्झौता सम्म गर्न नसकिरहेको गुनासो सुनिरहेकै बेला गैरसरकारी संस्थाहरुले छिटै गरेको कामको सरहना गर्नुपर्ने दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङले बताए ।